သာလွန်ဇောင်းထက်| January 8, 2013 | Hits:14,170
11 | | ကားဈေးကွက်တွင် ရောင်းလိုအားက ၀ယ်လိုအားထက် များပြားပြီး ဈေးများ ကျဆင်းလျက်ရှိသည် (ဓာတ်ပုံ -သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
`အ´ အက္ခရာ ကားဟောင်းအပ်နှံခွင့် နိုဝင်ဘာတွင် လက်ခံမည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Sai Linyone January 8, 2013 - 4:23 pm	Who care these ugly automobiles? What kind of cars are these? They look odd and so ugly.
Reply	ကားညှော်နံ့ January 9, 2013 - 3:24 am	ကားတင်သွင်းခွင့်ကို ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်ဗိုလိချုပ်ကြီးတွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်လာတာ။ နောက်ဆုံး ဦးပိုင်လက်ထဲမှာ ရှိခဲ့တယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဂျပန်ကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရ လုပ်ချင်တော့ ဂျပန်ကားဟောင်းသွင်းခွင့်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကားသချီိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာတိုင်း ကားကောင်း၊ ကားသစ်စီးခွင့် ရသင့်ပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ အခွန်ကောက်ပြီး သွင်းချင်တဲ့ကားကိုသွင်းခွင့်ပြုလိုက်တော့ တိုင်းပြည်မျက်နှာ မငယ်ဘူးပေါ့။ ခု လောလောဆယ် အကောက်ခွန်နဲ့ ကညနကို လုပ်ငန်းရှင်တွေက လုပ်ကျွေးနေရတာပါ။
Reply	BMW LEXUS January 10, 2013 - 12:04 pm	My friend, let them drive smelly cars because the government is second hand government anyway(military junta to quasi-civilian junta). As long as you and I are driving BMW and Lexus, thinking about Burma is causing more headache.
Reply	PYI PAING SO January 10, 2013 - 8:57 am	ANY WAY..MUCH BETTER THAN BEFORE…
Reply	win January 11, 2013 - 8:51 pm	right
Reply	Lailun January 10, 2013 - 11:59 am	The car in the picture is ugly but the girls look awesome.
Reply	aungaung January 15, 2013 - 12:45 pm	ကားဆိုတာတွေ က အချိန်ကာလတော်ကြာသုံးစွဲလို့ ရတဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်တာကြောင့် ပေါ်လစီတွေ နည်းစနစ်တွေ ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ( အဆင်ပြေ သင့်တော်တဲ့) လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော် ဟိုတုန်းက တရုတ်လုပ် ဖုန်းတွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ သုံးတယ် နောက်တော့ ဟိုဟာချွက်ယွင်း ဒီဟာချွက်ယွင်း လတိုအတွင်းမှာလေ… ပြင်လိုက်ရင်လည်း အသစ်ဈေးနီးလောက် .. ပြန်ရောင်းရင်လည်း ရောင်းမရနဲ့ ကိုယ့်ဆီမှာဘဲ သောင်တင်နေတဲ့ အဖြစ်မျိုးကိုတော့ မလိုလားဘူးပေါ့ဗျာ… (တတ်လို့ ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါ.. )
Reply	Full Moon January 16, 2013 - 7:55 am	I am just interested in the girls’ look, Aung Aung. Lets go home to Burma and meet these girls. I have no interest on these ugly cars. Who cares these cheap cars? Just look the girls, not the cars, man. KIA, Hyundai, Suzuki, Isuzu, Thein Sein, Shwe Mann, Min Aung Hlaing.,,,,,,,,,,,
Reply	Thu ya htet January 16, 2013 - 12:48 pm	Thank You……..
Reply	MoeAungmoe January 22, 2013 - 9:29 pm	Good
ကားသစ်များ တင်သွင်းရာတွင် ဘယ်မောင်း စနစ်များသာ ခွင့်ပြုရန် စီစဉ်နေ
ရန်ကုန်တွင် စည်းကမ်းမဲ့ ပြိုင်ကား ၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ဘုရားပွဲပြန် ထော်လာဂျီနှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိုက်မိ၍ လူ ၄ ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး
ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အသီးအပွင့် တန်ဖိုးကြီးကားများ
ယာဉ်တိမ်းမှောက်၍ ကားကြုံလိုက်စီးသည့် ဆရာမ ၂ ဦးသေဆုံး
ရန်ကုန် မြို့လယ်တွင် ရမ်းကားမောင်းနှင်သော ယာဉ်ကြောင့် ၃ ဦးသေ၊ ရဲ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ